Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Umkhwa omtsha onobungozi eJamani: Ukuhlaselwa kweKnife
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Safety • uthutho
Ngelixa eUnited States okanye eMexico ukudubula kwamva nje kusisisongelo kukhenketho, esi sisongelo singokuhlaselwa ngeemela eJamani.
Abakhweli abaliqela ababekhwele uloliwe we-ICE Intercity ohamba phakathi kweRegensburg neNuremberg eJamani bonzakele kuhlaselo lwemela namhlanje, abathathu ngokunzulu.
Uhlaselo lwenzeke kamsinya phambi kwentsimbi yesi-9 kusasa ngoMgqibelo kulo loliwe ukhawulezayo wale mihla.
Ummi waseSyria oneminyaka engama-27 waba nomsindo ngaphandle kwesizathu. Wahlasela abakhweli kwigumbi lakhe.
Uloliwe wenza ukumisa okungxamisekileyo kwisikhululo sikaloliwe esilandelayo kwaye amapolisa akwazi ukumbamba umhlaseli kwaye abaphenduli bokuqala babalekisele abakhweli abonzakeleyo kwisibhedlele esikufuphi.
Amapolisa aseJamani anoxanduva lokhuseleko kwizitimela akakwazi ukwenza izimvo ngeli xesha.
Kukho umkhwa oqhubekayo eJamani ngokuhlaselwa kweemela, ezinye zibulala.
Uhlaselo lwanamhlanje yayisisizathu sokuba abaninzi eJamani bathumele imiyalezo echasayo kwiimbacu zelizwe kuTwitter, ngetelegram, kunye namanye amajelo eendaba ezentlalo, okanye amaqela encoko.
Kwiveki nje edlulileyo ukuhlaselwa kwiDolophu yakudala eDusseldorf, iziko lokuzonwabisa kunye nobomi basebusuku yayiluhlaselo lwesibini kwiiveki ze-2.
Akukho mntu wabulawa, kodwa 2 17 iminyaka ubudala waba nethamsanqa ukuba oogqirha ababini ababebukele bakwazi ukuthintela ukopha ebulalayo.
Emva kwanamhlanje isiganeko, oololiwe abahamba umgama omde baphinde banikwa umzila obangela ulibaziseko ukuya kwiyure enye.
Umphathiswa wezangaphakathi eJamani uHorst Seehofer wothukile kwaye wabalisa umnqweno wakhe wokuba abo benzakeleyo kunye nabo babone uhlaselo baphile kungekudala.
Ubulele isebe lamapolisa ngenyathelo elikhawulezileyo nelikhuselekileyo lokuthintela nakuphi na ukwenzakala okanye ukubhubha kwabantu.